Dowlada Koonfurta Suudaan oo Ciidamo Farabadan u direysa Magaalada Pibor – SBC
Dowlada Koonfurta Suudaan oo Ciidamo Farabadan u direysa Magaalada Pibor
Dowlada Wadanka suudaan ayaa shaacisay in Ciidamo dheeri ah ay u direyso Magaala Pibor si ay u xakameyso in dagaal xoogan uu halkaas ku dhexmaro qaba’il halkaas wada dega oo xiisad ay ka dhex alosan tahay.
Xiisad ka dhex xaloosan qabaailada Lou Nuer iyo Murle ayaa circa isku shareertay iyadoo qaar badan oo ka mid ah dadka degan Magaalada Pibor ay bilaabeen inay halkaasi ka cararaan xiisada ka jirta darted oo ay ka cabsi qabaan in dagaalka sameyn ku yeesho.
Dhinaca 6,000 oo dagaal yahan oo ka socda kooxda Lou Nuer ay baacsi ku haya kumanan dadka murile oo ka barakacay Magaalooyinkooda kuwaasi ooku sii socda Dhinaca baadiyaha deegaanada ay xiisadu ka tagaan tahay.
Qaabilka xiisadu ka dhex aloosan tahay ayaa horey waxaa u dhexmaray dagaalo xoogan oo waxyeelo xoog leh ay ka dhalatay iyadoo sidoo kale lagu kala qabsaday dagaaladaas caruur iyo haween.
Madaxweynaha Koonfurta suudaan Mr Salva Kiir ayaa ugu yeeray dhinacyada xiisadu u dhaxeyso inay joojiyaan xiisada dagaalka islamarkaaisna ay qaataan talooyinka suuban ee ay soo jedinayaa Maamulka koonfurta suudaan.
Afhayeen u hadlay Ciidamada amaanka Col Philip Aguer ayaa sheegay in 2000 oo ciidamo lo dirayo Magaalada Pibor 24-ka saac ee soo socda si ay xaalada halkaas ka jirta wax uga qabtaan
Dhinaca kalena maalintii jimcaha waxaa Magaalada Pibor waxaa ay QM u dirtay ciidamo farabadan kuwasi oo difaaci doona Magaalada Pibor oo ay xiisado ka taagan tahay.
Hayada MSF ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay wax ay ku sugan yihin shaqaalaheeda oo ka shaqeynayay Isbitaalo ku yaalay deegaanada laga barakacay kuwaasi oo gaarayay 130 qof oo shaqaale samafal ah.
Barakaca balaaran ee ka soconaya MAgaalada Pibor waxaa uu sameyn ku yeeshay HAweenka Caruur iyo dad da’a ah kuwaasi oo ka cabsi qaba in waxyeelo ay ka soo gaarto xiisada dagaal ee qabaailka suudaan.
Dhismayaal iyo gobo caafimaad oo ku yaala Magaalada Ayaa dab la qabadsiiyay kuwaasi oo gabi ahaanba ah kuwo gubtay